Inkqubo yeNkxaso yeApple ine-interface entsha kunye nemowudi emnyama emva kohlaziyo lokugqibela | IPhone iindaba
I-Apple ayikaze yaziwe ngokuhlaziya usetyenziso lwayo kutshintsho lokuqala, enyanisweni, ezinye zazo zithatha ixesha elide ukufumana umdla kwi-Apple kunakwizicelo zomntu wesithathu. Enye yazo sisicelo seNkxaso yeApple, isicelo esasungulwa yiApple kwiVenkile yeApple malunga neminyaka emithathu edlulileyo kunye nayo ihlengahlengisa ukulungiswa kunye nokuphucula inkonzo yabathengi.
IOS 13 yazisa ngomxholo omnyama, enye yezona mfuno zinkulu kwinxalenye yabasebenzisi kwaye yayilinyathelo elifanelekileyo emva kokuqaliswa kwezikrini ze-OLED ngesandla se-iPhone X. Ngaphandle kokudlula ngaphezulu kweenyanga ezi-6 oko yasungulwa, Kungoku xa iApple ikhumbule ukuba yayinesicelo ngaphandle kokuhlaziya.
Eyona nto intsha siyifumana kuhlaziyo lwamva nje lwesicelo seNkxaso yeApple, siyifumana ikwimo emnyama, imowudi emnyama ekhatshwa ngumbonakalo wesiko kwaye sijolise kwiimveliso esizidibanise ne-ID yethu, ukuze kube lula ukufumana isisombululo kwiingxaki esinokuthi sixinezeleke kuso.
Ngonxibelelwano olutsha, kulula kakhulu, hayi kuphela ukufumana isisombululo kwingxaki esinayo, kodwa kulula Nxibelelana nenkxaso yeApple, fikelela kwaye ulawule imirhumo yethu, fumana iitutorials zokumisela i-terminal yethu ... Nangona esi sicelo sifumaneka kubo bonke abasebenzisi be-iOS, eminye yemisebenzi yayo isenokungafumaneki kumazwe athile okanye kwimimandla ethile.
Yintoni entsha kuhlobo lwe-4.0 lwesicelo seNkxaso
Ukujongana ngokutsha komsebenzisi kwaye ixhasa imo emnyama.
Uphuculo xa kufikwa ekufumaneni isisombululo kwiingxaki ezichaphazela isixhobo sethu.
Ukuqhagamshelana nathi kwinkonzo yabathengi ngoku kukhawuleza kwaye kulula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Isicelo senkxaso sika-Apple sisungula ujongano kunye nemowudi emnyama emva kohlaziyo lwamva nje
I-Apple Maps ibonisa indawo apho bavavanya khona i-COVID-19 e-US
I-11x33 Podcast: IMac yokuqala ene-ARM ngo-2021